Ukubhema high-amandla insangu kungalimaza izinzwa ebuchosheni - Izindaba Rule
Ukubhema high-amandla insangu kungalimaza izinzwa ebuchosheni
Lesi sihloko osesikhundleni “Ukubhema high-amandla insangu kungalimaza izinzwa ebuchosheni” lalotshwa Ian Isampula Science umhleli, The Guardian ngoLwesihlanu 27 Novemba 2015 00.01 UTC
High-amandla insangu kungalimaza yezinzwa ukuthi ukusingatha ukugeleza kwemiyalezo ngaphesheya ezimbili neengcezu wengqondo, ososayensi bemi kwelokuthi. Imishini yokuhlola ubuchopho babantu ntu njalo ngabhema strong insangu skunk-like kwembulwe umehluko lobhacile ndaba white lebhokisi kwesokunxele bese kwesokudla ama- futhi ithwala amasignali kusukela kolunye uhlangothi yobuchopho nezinye.
Izinguquko zazingabonakali kulabo akazange asebenzise insangu noma ngibhema kuphela amafomu kancane anamandla zomuthi, abacwaningi bathola.
Related: insangu: yini igama?
Lolu cwaningo kucatshangwa ukuthi ngowokuqala ukubheka imiphumela ka insangu potency sakhiwo ebuchosheni, futhi usikisela ukuthi balisebenzise kakhudlwana skunk kungase kubangele umonakalo owengeziwe the callosum Corpus, okwenza yezokuxhumana ngaphesheya ama- ebuchosheni kancane ephumelelayo.
Paola Dazzan, a neurobiologist at the Institute of Psychiatry at zeNkosi College London, uthe imiphumela wabonakala kuhlobene ezingeni isithako esisebenzayo, tetrahydrocannabinol (iTHC), e insangu. Nakuba amafomu yendabuko insangu aqukethe 2 ukuze 4 % iTHC, izinhlobonhlobo eyingozi kakhulu (zazo zikhona mayelana 100), ingaqukatha 10 ukuze 14% iTHC, Ngokusho the DrugScope charity.
"Uma ubuka callosum Corpus, lokho sesiyatholakala umehluko okuphawulekayo ndaba white phakathi kwalabo abasebenzisa okusezingeni potency insangu kanye nalabo ungayisebenzisi emuthini, noma sebenzisa izidakamizwa low-potency,"Kusho Dazzan. I callosum Corpus ocebile cannabinoid receptor, enikezwe izenzo iTHC amakhemikhali.
A DTI umfanekiso callosum Corpus, njengoba kubonakala kusukela ohlangothini, kuboniswa obomvu kanye esikhulu isizinda MRI umfanekiso zobuchopho. Photograph: Institute of Psychiatry
"Umehluko uwukuthi lapho ukuthi unayo sengqondo noma cha, futhi sicabanga le ngokuqinile walandisa potency we insangu,"Wanezela. Imininingwane cwaningo kuthiwa kubika iphephabhuku Medicine ngokwengqondo.
Abacwaningi kusetshenziswa izindlela ezimbili ukuskena, magnetic resonance imaging (MRI) futhi okusheshayo tensor imaging (DTI), ukuze sihlole i-callosum Corpus, esifundeni elikhulu kunawo wonke udaba white, in ubuchopho 56 zeziguli eziye ibike isiqephu sokuqala sengqondo, futhi 43 amavolontiya aphilile ezivela emphakathini wendawo.
Lokhu kuhlolwa lwathola ukuthi abasebenzisi nsuku zonke ephezulu potency insangu kwadingeka mkhulu kancane - by mayelana 2% - "Asho diffusivity" in the callosum Corpus. "Lokho kubonisa inkinga kule ndaba emhlophe ekugcineni kwenza esebenza kahle,"Dazzan utshele Guardian. "Asazi ngokuthé ngqo ukuthi kusho ukuthini ngoba umuntu, kodwa kusikisela kukhona ukudluliselwa kancane ephumelelayo kolwazi. "
Ucwaningo angeke akwazi ukuqinisekisa ukuthi izinga iTHC e insangu imbangela izinguquko indaba white. Njengoba Dazzan amanothi, kuba kungase kube ukuthi abantu ezilimele udaba white maningi amathuba okuba babheme skunk kwasekuqaleni.
"Kungenzeka ukuthi laba bantu kakade ubuchopho ezahlukene futhi cishe ziyothambekela kakhudlwana ukusebenzisa insangu. Kodwa lokho singasho ukuthi uma akuve potency high, futhi uma kuwukuthi uyabhema njalo, Isimiso sezinzwa sobuchopho bakho lihlukile ubuchopho nomuntu obhemayo insangu evamile, futhi kusukela nothile ongumngane ongenazo ngibheme insangu nhlobo,"Wathi.
Related: Ngakho ukubhema skunk kubangela sengqondo, kodwa insangu onomoya omnene asipheli?
Kodwa ngisho nangosizo ukungaqiniseki phezu imbangela nemphumela, wanxusa abasebenzisi kanye nabasebenzi bezempilo yomphakathi ukushintsha indlela abacabanga mayelana nokusetshenziswa insangu. "Lapho kuziwa endabeni yotshwala, thina esetshenziswa ukucabanga ukuthi iyiphi indlela abantu okuningi baphuze, futhi kungakhathaliseki ukuthi ukuphuza iwayini, ubhiya, noma whiskey. Yilokho okufanele sicabange ngakho insangu ngendlela efanayo, mayelana iTHC kanye nokuqukethwe ezahlukene insangu ungaba, futhi lungabangela ukukhungatheka okukhulu imiphumela on nempilo kuzohluka,"Wathi.
"Njengoba siye basikisela ngaphambilini, lapho ekuhloleni ukusetshenziswa kwensangu, kubaluleke kakhulu ukuba baqoqe on kaningi kangakanani nokuthi yini uhlobo insangu isetshenziswa. Le mininingwane kungasiza kwezakhi ingozi yezinkinga zempilo yengqondo kanye ukuqwashisa uhlobo umonakalo lezi zinto ongayenza ukuze ubuchopho,"Wanezela.
Ngo-February, Dazzan nabanye e-Institute of Psychiatry kubike ukuthi ukutholakala kalula skunk eningizimu yeLondon ingase ibe ngemuva ukwanda inani amacala amasha sengqondo kokuba kukhonjwe insangu.
32044	0 Isigaba, insangu, Izidakamizwa, Health, Ian Sample, kwesigaba Main, Mental Health, Neuroscience, Izindaba, Psychiatry, Isayensi, The Guardian, UK news
← 30 imibono isipho sikaKhisimusi izingane tech-savvy Abayishumi izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu for bethengela yakho Christmas →